विश्वेश्वर ओझा – Mayorkhabar.com
Tag: विश्वेश्वर ओझा
अमरगढीबासी ! तपाईं कतै अलपत्रमा त पर्नुभएको छैन ? ९८४८८५९१८१ मा फोन गर्नुस है !
mayor khabar १३ बैशाख २०७७ १६:२६	No Comments अमरगढी नगरपालिकाविश्वेश्वर ओझा
लकडाउनका कारण काठमाडौंमा अलपत्र परेका आफ्ना नगरबासीलाई घर फर्काउन अमरगढी नगरपालिकाले शनिबार दुई वटा बस काठमाडौ पठाएको छ । सुरक्षा निकाय र यातायात व्यवसायीको समन्वयमा नगरपालिकाले बस पठाएको हो ।
View More अमरगढीबासी ! तपाईं कतै अलपत्रमा त पर्नुभएको छैन ? ९८४८८५९१८१ मा फोन गर्नुस है !